Ezinye izitayela zilula ukusabalalisa, kodwa ezinye ziyi-Hybrids
Ukuba unesigxina kwixesha eliqhelekileyo, mhlawumbi uvile izitya zokugcoba ezichazwe njengezinto zokukhwela, i-strokers okanye i-tweeners. Olu alukho uluhlu olupheleleyo lweendlela zokuhamba, kodwa zizinto ezintathu eziqhelekileyo. Nangona kunjalo, inkcazo ye-tweeners (ngokukodwa inhlanganisela ye-cranker kunye ne-stroker) yedwa ibonisa ukuhlukanisa zonke i-bowler kwibhakethi elincinci elincinci lingenakwenzeka.
Kukho kwakhona amandla okugungqa, abagxeki, abaniki-mbini, (nangona kwakhona, unokuphikisana ne-bowler-bower is a cranker okanye i-stroker okanye i-tweener okanye i-spinner) kunye nezinye iindlela ezigqithisileyo.
Nangona iifayile zithela ngokwaneleyo kangangokuthi kuba phantse ukungenangqiqo ukuzama ukubeka umdlalo wakho kwelinye, kunokukunceda ukwazi apho uwela khona. Ngokomzekelo, ukuba ukhangele ukuthenga ibhola entsha kwaye ufuna ukwazi ukuyiqhuba kakuhle, umqhubi wakho wesitolo unokubuza malunga nesitayela sakho sokumhambisa ukuze amnike ingcamango yokuba uya kuqala.
Iibhotile ezenza izikhonkwane ziphazamise kwi-blaze yozuko, zininzi zokujikeleza kwebhola ngokukhawuleza kwaye ngokuphindaphindiweyo ukuguqulwa kwamanzi kubiza kuthiwa yi-crankers. Ezi zimbiza zikhupha umfanekiso wamandla kunye nokuzithemba-i-bowler bowler. Iinqwelo zincinci zingabonakala zinqabileyo, kodwa ziphonsela ukuhlukana okukhulu. Uhamba nommandla.
Strokers zizonke malunga nokuchaneka. Akunjalo nje ngeprofayile ephakamileyo, kodwa ngokuqinisekileyo bafumana umsebenzi. Ukunikezelwa kwazo ngokugqithiseleyo kwebhola nge-swing back back results results in more results, kwaye oku kungakho kutheni amaninzi amaninzi asebenzayo.
Njengoko igama lithetha, ama-inter-mix mix the style of crankers and strokers. Ukuba awuhambisani nakwezinye iindidi kodwa ufana nomnye ngandlela-thile, u-tweener. Olu daba lukhulu kunye nolwazi oluxhasayo. Unokwenza isitayela sakho kwisakhelo ngasinye kunye nokuba yiyiphi imingeni. Iingqapheli ngokuqhelekileyo zisebenzisa i-back-back back swing, efana ne-crankers, kunye nokuhanjiswa kwe-strokers.
Kodwa akunjalo. Ngokukodwa, i-tweeners isebenzisa nayiphi na indlela abacinga ukuba iya kusebenza kakuhle kwiimeko ezithile.
Yiba ne-gander kule ngcaciso emfutshane malunga neenkcukacha ezithe nkcukacha.
Iimpawu zeeHindu zikaHindu zichazwe
Ukubuyiselwa kokuPhambili kweeKlayari